Vidio Dr. Plandemic Judy Mikovits bụ Eventdị Omume nke 201 nke ụdị akụkọ aghụghọ (video): Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 11 Ka 2020	• 30 Comments
isi mmalite: sirome.info
Ọ ga-abụrịrị na ị hụrụ ya, ihe nkiri Plandemic nke nwanyị bụ Dr. Judy Mikovits na-akpọ. A sịrị na a tụrụ ya mkpọrọ ọtụtụ ụbọchị ma nwụchie ya n'enweghị ikpe ọ bụla. Mgbe ahapụchara ya, ọ bịara na nkwupụta niile gbasara nje virus na ọgwụ mgbochi ọgwụ nke Dr. Ekwuru na ejiri Fauci mee mpụ megide mmadụ.
Onye onwe ya Omume 201 site na slọ Akwụkwọ Johns Hopkins, mara na ịlụ ọgụ akụkọ ụgha bụ akụkụ dị mkpa nke ịme anwansị oria ojoo nke coronavirus. A na-ekewa anyị.
Zọ kachasị mma iji gbuo ndị mmegide n’ikpeazụ bụ ịmalite akụkọ na-adịghị mma ma yie ntụkwasị obi, n'ihi na onye na-eme ihe nkiri na-abịa akụkọ dị mma ". Ma ka ọ dịgodị Forbes na-etinye isiokwu a buru ibu Mikovits ga-abụ onye na-akwado ọgwụ mgbochi. Nke ahụ nwere ike ịbụ eziokwu, mana ọ ga - abụkwa na nwanyị nwanyị a na - akwụ ụgwọ Bill Gates iji mee ihe m kwuru ọtụtụ oge ebe a: play oppoisition na - achịkwa.
N'ihe banyere mmegide na-achịkwa, a na-ewu bọmbụ n'ime ala abụọ. Anụrụ m ka ị na-eche:Ah, Vrijland, kwụsịrị okwu nzuzu mmegide gị!“Ọ dị m nwute, mana ị hụla ihe ọ bụla doro anya gosipụtara - ewezuga mmetụta gị na-ewe iwe? Ọ dịghị mma? Nke ahụ kwesịrị ịma gị jijiji. Ikwesiri iju gi anya na Nwanyi a enwetala otutu mgbasa ozi na ndi mgbasa ozi.
Karịsịa, usoro mgbasa ozi ndị ọzọ na-akwalite ya nke ukwuu ma ị nwekwara ike ịhụ vidiyo a na-ekpesi ike na Facebook na mgbasa ozi mmekọrịta ndị ọzọ. "Ọ dị mma, gịnị kpatara nke ahụ?"Onweghị ihe dị njọ na nke ahụ, ọ bụghị na m dọọla ọtụtụ aka na ntị banyere ịdị adị otu nnukwu mgbasa ozi na-elekọta mmadụ. Ọ bụrụ na ndị agha ahụ nwere ike inye aka melite gị, ha ga-enwe obi ụtọ ime nke ahụ. Ọ bụrụ na mgbe ahụ ekpughere pawn a na-achịkwa na-esochi ya ma gị onwe gị na-agbara ya àmà, ha ga-akụ gị aka.
Akụkụ nke ịme ihe ngosi 201 bụ na a ghaghị agakọ akụkọ ụgha. Kedu otu kachasị mma ị ga-esi hazie nke a? Site na ịmalite akụkọ adịgboroja na nyochaa nkesa ya (Nnukwu Data) na ịkọwa mmetụta ọfụma na ịhụ onye na-eme ma ọ bụ anaghị anabata ya. Usoro data buru ibu nwere ike tughari mmeghachi omume gị ma nyochaa mmetụta mmekọrịta na-adabere na oku gị na-enwe mmetụta sensọ site na ekwentị gị (akpaghị aka site na scripts AI).
Anyi na-agbakwa àmà netwọ nchekwa, ebe ọtụtụ ndị nkatọ dị ka o kwere mee, ka ha wee kwue n’oge na-adịghị anya, “Ekweghị m ihe ọ bụla ọzọ - ọ bụrụ na esiteghị na mgbasa ozi mgbasa ozi”.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: forbes.com
Ihe nchekwa nchekwa QAnon: a smart PsyOp iji chọpụta ndị na-eche echiche
Nkwughachi: 5G na corona enweghị ihe ha na ibe ha na-eme!
Biko rụba ama: ihe ndekọ Covid-19 Janet Ossebaard (Ninefornews) bụ ọnya akụkọ ụgha
Tags: 201, kasị mma, achịkwa, Dr., omume, adịgboroja, Fauci, agba, achịkwa, Judy, Mikovits, ozi ọma, ozi ọma, mmegide, mmegide, Mmepeanya, na, video, ụzọ
11 May 2020 na 15: 20
Gini bu 'mikovits' CV? Ndi akpọrọ ya Mikovits n'ezie?
Mgbe ahụ amaara m nke ọma maka onwe m. Ha noro mgbe nile, egwu!
11 May 2020 na 17: 45
idd mikowitz, kaufman… ka m ghara ikwu nke ukwuu😷
11 May 2020 na 18: 15
11 May 2020 na 15: 26
Ọ bụ ụdị agha ruru unyi ma nke nwere ọgụgụ isi. Enwere m olileanya na Q (na Trump) ga-ekpochapụ ọnọdụ miri emi. Nihi na ekwusara m nke a dị ka eziokwu, mana ihe mechara bụrụ ihe na-adịghị mma, adabala m n'ọnyà ahụ na nke ahụ pụtara na a na-akwa m emo n'ihe niile m na-ekwu ugbu a. Yabụ na ọ dị ezigbo mkpa ịkọwapụta ndị na-eteta n'ụra ebe ịgba aghara.
Echere m na Andrew Kaufman bu ihe kwesiri ekwenye, enwere m olile anya na adigh m eme ozo…
(The anatomi nke covid)
11 May 2020 na 17: 11
Ndo, mana ihe ịchọrọ ịma gbasara ịdezi ihe ntanetị n'ịntanetị etinyerela nke ọma n'ọtụtụ ederede ebe a na weebụsaịtị, yabụ ịkwesighi iji aka gị tinye ndị na - agụ ya ọwa ndị ọzọ. Do maghị ma ejikọtara ozi a na disinfo.
Ihe niile ị chọrọ ịma:
11 May 2020 na 17: 25
Andy Kaufman kọwara na njikọ nke abụọ nke ọma na nje virus dị iche na nje ndị dị na mpụga ọ na-adịkarị. Germ vs terrain tiori. Agbanyeghị nje virus na-apụ iche, ọbụlagodi nje a, nnwale ndị ahụ ezighi ezi, wdg N'agbanyeghị na njikọ nke teknụzụ CRISPR gene na-akọwa ihe niile gbasara ịgba ọgwụ mgbochi ahụ, gbasara ihe nje bụ n'ezie, echere m na ozi nke Kaufman dị mkpa. Ewezuga ọ bụ onye ọrụ disinfo, mana echeghị m na ọ bụ.
11 May 2020 na 17: 48
Ọ dị mma nke ukwuu, mgbe ahụ aga m amụ ya
11 May 2020 na 19: 34
Echere m na ị dịla njikere n’oge na-adịghị anya, ọ dị mwute na. Agụnyere na ajụjụ ọnụ maka London London elekere 2. Yiri na aghugho diri m. Na-anọgide na-akpasu iwe. N'ihi na ọ na-egosi n'ezie na ọ na-ekwenye ekwenye.
11 May 2020 na 23: 06
Mkpụrụ Obi Björn Eybl na-ebute Ọrịa dabere na Dr Hamer iwu nke okike nke Biologika Nederland kuziri. Akwụkwọ a na-ekwu ihe ndị a banyere nje, ọrịa na nsogbu iku ume (ọtụtụ ihe mgbaàmà nke ndụ corona dịka ndụ gị siri dị).
Ruo taa, nje ahụbeghị nje ọ bụla. A na-achọpụta nje na-apụtaghị ìhè site na njikọta ma ọ bụ na-ejikọghị protein na protein ndị ọzọ. O nweghi ihe akaebe doro anya na ekwuru na nje na-ebute oria. Obi abụọ adịghị ya, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke protein (globulin) ka a na-ahụ n’ọbara na n’arụ ndị ọzọ. Glokpụrụ iyi ndị a yiri nke a na-akpọ 'nje'. Mkpụrụ ọka cerebrum nwere ike ịrụ ọrụ na protein ndị a iji wughachi anụ ahụ ectodermal mebiri emebi n'oge usoro ọgwụgwọ.
N’egwuregwu oge niile, e mere ọdịiche dị n’etiti ‘ọrịa dị ize ndụ, ezigbo ahụ́ ọkụ’ na ‘flu na-adịghị emerụ ahụ’. A na-ewere syndromes siri ike dị ka 'ezigbo ọrịa', a na-achụpụ usoro ọkụ ka 'oria' ma ọ bụ 'oyi'. Site na iwu nke okike, anyị na-atụle naanị ihe mgbaàmà nke onye ọrịa:
Mgbu mgbu = esemokwu nke onwe, usoro ọgwụgwọ
Ahụkarị nkịtị = mgbanye ma ọ bụ esemokwu isi, usoro ọgwụgwọ
Stru akpukpo aru = achoghi ilo ma o bu fesaa ihe, ogwugwo
Larynx = ụjọ ma ọ bụ esemokwu na - enweghị nsogbu, usoro ọgwụgwọ
Avian, ezì, na ọrịa ọhụrụ bụ 'mkpọsa' ndị WHO mere.
Na 'oria na-efe efe dị egwu', dị ka ọrịa ntiwapụ, ọgwụ a na-eji ọgwụ ndị dị ka Tamiflu ma ọ bụ Relenza (mgbochi iku ume na-egbochi ọgwụ ịgwọ), yana ịgba ọgwụ mgbochi, yana hypnosis.
Esemokwu: Ọgba Ahịrị Na - akpata Nsogbu (nwoke na - eme ihe, na - awakpo) ma ọ bụ ọgụ ụjọ ụjọ (nwanyị kwụsịrị, iwepụ). Nke a dabere na ịdị ụkọ, ọkwa hormone na esemokwu ndị gara aga. Ndị mmadụ na-atụ ụjọ ịhapụ ókèala ha (dịka onye ibe ma ọ bụ ọrụ) ma ọ bụ ebe dị na mpaghara (dịka ọkwá ma ọ bụ ọkwá).
Achịcha: muronsa na Bronchial na windpipe, epithelium plate, ectoderm
Arụ Ọrụ: Mbelata sel nke bronchial na trachea mucosa, anaghị ahụkarị.
Uche nke ndu: ogha n’iru na-abawanye dayameta. N'ihi nke a, enwere ike ịmị ikuku ma kubie ume iji chebe ókèala gị.
(N’ime anumanu, imeghari ndu na - eme ka uche puta ihe. N’ebe mmadu no, obughi n’ihi na agha anyi na - aghaghi imekorita uche ya, ya mere ihe mmetuta omuma ya abughi ihe ozo. Otodi, aru anyi n’eme ka odi ka umu anumanu. )
Usoro ọgwụgwọ: Mweghachi azụ nke mucosa na nsị yana ịmịkpọ na-eme ka olu sie ike nwere ike ibute ụkwara na ahụ ọkụ.
Enwere ike ịkpalite esemokwu ndị dị n'elu site na akụkọ akụkọ na usoro ahụ. Site na irighari usoro, enwere ike idozi esemokwu ndị a ma ndị mmadụ nwere ike daa ọrịa.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrịa niile na-esite na azụ site na esemokwu nke uche na-akpata mgbanwe anụ ahụ nke anụ ahụ (mmụba ma ọ bụ ibelata sel ma ọ bụ arụ ọrụ). A na-emezi mmezi ndị a site n'enyemaka nke ụmụ nje (fungi na nje fungal na-akụghasị mkpụrụ ndụ, nje na 'nje' na-ewulite mkpụrụ ndụ) nke ahụ anyị mepụtara. Exzọ ndị a bụ: nsị (dịka nri nri), n'ibu (dịka nbipu nke ọkpụkpụ) na mkpụrụ ndụ ihe nketa (dịka Down syndrome). N'okọta ọnụ na-arịa ọrịa bụ n'ihi ọgụ ụkọ a na-enwe. Usoro ndị a abaghị uru n'ihi na mmetọ ahụ dị ka a kụziiri anyị adịghị mma. Usoro ndị a adịghị emerụ ahụ n'ihi na ha nwere ike ibute agha na ya kpatara ọrịa. Ndị nọ n'ọchịchị chọrọ ka anyị kwenye na nsị na ọrịa na-esite n'èzí nakwa na anyị nwere sistemụ mgbochi nwere ebe nchekwa iji gbochie nje na-alụ ọgụ. Nke a na-enyere ha aka ịnye ụzọ mpụga. Ogwu nke ha choro ijikọ mmadu na Artificial Intelligence.
12 May 2020 na 11: 08
Edere akwụkwọ ahụ tupu ma ọ bụ mgbe achọpụtara teknụzụ CRISPR? N'ihi na nke ahụ ga-enyere anyị aka ilekwuo anya na ọkwa DNA na RNA.
12 May 2020 na 11: 43
E bipụtara akwụkwọ Mkpụrụ Obi akpata ọrịa na 2010.
Dr Hamer chọpụtara iwu banyere ihe ndị dị ndụ na njedebe 70s.
Ana m eche ma ọ bara uru mgbe achọpụtara teknụzụ CRISPR dịka isi mmalite ndị isi. Ọ fọrọ nke nta ka enyochala ozi niile. Ikekwe usoro a dị adị tupu oge nkuzi a.
12 May 2020 na 13: 53
@Martin, ọmụmụ ihe na-atọ ụtọ tumadi gbasara RNA / luciferase. M nzọ nke a bụ akụkụ nke ọgwụ mgbochi ọhụụ. O di nwute na enweghi m ike ihu nchọpụta zuru oke, ọ na-efu ego.
Usoro incPRINT (protein in-cell - mmekọrịta mmekọrịta RNA) meriri ihe ịma aka ndị a site na iji luciferase gosipụtara nke ọma gosipụtara mmasị nke MSNA nwere akara site na protein MS2 (MS2CP) . Ọ bụrụ na mmekọrịta dị n'etiti RNA nnwale na protein nnwale pụtara na sel, a na-atụle ya site na luminescence site na nyocha nke sel na immunoprecipitation nke protein a tagged.
12 May 2020 na 16: 16
+ Ọkụ na-acha ọkụ 🤔hmmmm
GreenLight Biosciences welitere $ 17m iji welie nrụpụta mRNA maka nyocha ndị chọrọ ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19
Luciferase bụ aha a na - akpọkarị enzymes nke na - ebutekarị bioluminescence na okike. E si na Lucifa nweta aha a, nke putara “onye n’enwe oria”. Ihe atụ kachasị mara bụ luciferase nke na-egbuke egbuke Photinus pyralis. Na mmeghachi omume nke luminescent, a na-emepụta ọkụ site na ọxịdọrọ nke luciferin (ụcha) na adenosine triphosphate (ATP).
12 May 2020 na 18: 14
o doro anya na a na-agụ ya na Salmon.
aṅụ dere, sị:
14 May 2020 na 20: 51
Enwere ike ibudata akwụkwọ Mkpụrụ Obi na-akpata Ọrịa n'efu dị ka akwụkwọ E-akwụkwọ site na onye ntụgharị: https://zielsoorzakenvanziekte.be/gratis-download-boek-zielsoorzaken-van-ziekte/
Marcel Korver dere, sị:
11 May 2020 na 16: 17
Biko nyekwuo ihe omumu banyere nkwupụta gị gbasara Dr. Judy Mikovits, n'ihi na ọ bụ onye akaebe dị oke mkpa n'ihe metụtara nrụrụ aka na ụlọ ọrụ ịgba ọgwụ mgbochi yana ọ na-esokarị ọtụtụ ndị ọzọ dị mkpa dịka Robert F. Kennedy, Del Bigtree, Dr. Andrew Wakefield wdg. Ndị niile amaghị na nke ya. akụkọ abughi ezigbo !!!!
11 May 2020 na 17: 06
N'amaghị nke a na akụkọ ya abụghị nke ọma ma ọ bụ na égbè elu maara nke ọma na akụkọ ahụ abụghị nke ezigbo ya, kama ọ na - enyere aka iji kpuchie ụgbụ nchekwa nke nnukwu ụgbọ mmiri nchekwa iji mepuo ụgbọ mmiri ahụ dum, ka e wee jujuo ụlọ mkpọrọ agụmakwụkwọ ma ọ bụ Ndị mmadụ ga-eche ugbu a "Ọ dị mma, echekwala nkatọ ahụ, ha ga-ama nke ọma"
12 May 2020 na 08: 21
Nke a bụ ụgbụ nchekwa kachasị n'ihi na Robert F. Kennedy arụ ọrụ kemgbe ọtụtụ afọ na Del Bigtree nke Highwire emeela ezigbo ọrụ. N’ezie anyị nwere ike iju ajụjụ niile, mana nsonaazụ nke ọrụ ha dịka Vaxxed bụ n’ezie na nde mmadụ ebilitewo.
Ọ bụrụ na nke a bụkwa ụgbụ nchekwa, mgbe ahụ nke a bụ otu n'ime oke oke.
12 May 2020 na 11: 11
M na-enyere gị aka inwe olileanya na ọ bụghị, mana ka anyị lelee anya.
11 May 2020 na 17: 14
Chee echiche, Anaghị m ekwu nchekwa net pawns enweghị ike ikwu eziokwu. Ma ọ bụ na m na-ekwu na m bụ pro-ịgba ọgwụ mgbochi. Ihe m na-ekwu bụ na atụmatụ nchekwa nchekwa na-abụkarị nke 'ijikọ n'eziokwu', mana na enwere bọmbụ na ala abụọ.
Na vidiyo sket a m kọwara:
12 May 2020 na 08: 22
anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na enwere okpukpu abụọ ma ọ bụ na ọ bụghị ... ka anyị ghara ịtụ anya
Gerke Teitsma dere, sị:
11 May 2020 na 18: 10
nwanyị a kwuru na ya gụnyere nje HIV. dịpụrụ adịpụ .. nke ahụ na-agba ezigbo mbọ. na-enyo ya enyo na ọ kwesịrị ma mechie ọnụ ya mana enwere ya ohere ikwu okwu na mberede.
11 May 2020 na 19: 50
Ruo nwa oge, ha adịghị eche banyere eziokwu ma ọ bụ eziokwu. Nke a abaghị uru ọ bụla. Ọ bụrụ na ha nwere eziokwu ọ bụla ma ọ bụ eziokwu na ihe niile, naanị ebumnuche ya igbanwe ntụkwasị obi ha na ojoro ha. Ihe mgbaru ọsọ bụ isi sitere n'aka Hen, Mgbagha, dịka
ndị nkịtị na-agbagha, ichetakwala ihe ha ga-ekwere, nke a na-ekwupụta ụbụrụ ndị nkịtị, ndị ohu. Onye ahụ́ ya kpọnwụrụ akpọnwụ anaghị eme ihe ọ bụla ma ọ na-agafe agafe. Kpamkpam ihe ha chọrọ. Ot'odi aghara di nma karie ha nihi na ha nwere ike ichighari eleghari mgbe obula ma ekpe ozo wdg. Onweghi ike ijide ha na akparama agwa ha, dika okuku.
Ọ bụ ya mere ị na-ahụkarị ka ọtụtụ ụmụ nwoke na-ede edemede na-ekwu nke a, nwa nwoke nke ọzọ ekwuo, nwata nwoke ahụ ekwuo ihe wdg.
11 May 2020 na 20: 17
Kpamkpam .. ọ bụ ụdị hypnosis ... "ebe m kwesịrị ile anya, isi ga-agbagha m"
Nke ahụ bụ oge ahụike uche gị nwere ike ịrụ ọrụ.
12 May 2020 na 13: 02
Isiokwu ị maara na-abịa, siri ezigbo ike.
Onye ọ bụla na-agba ọsọ na ịkọ bitch, Pied Piper nke Hammering na-aza n'ime otu awa ma ọ bụrụ na ihe adịghị mma na bulite ị na-eme. (kedu mgbe ọ bụ?)
Enwere ndị agha niile ga na-ejere gị ozi nke ọma!
N'abali a, ana m akụ aka m na mbara ihu gị niile!
W Hörchner dere, sị:
12 May 2020 na 13: 24
N’onwe ya, a ga-ahụkwa isiokwu Forbes dịka okwu nduhie. Ihe ọ bụla ị gụtara ị ga-ekwenye ma ọ bụ tụkwasị obi na ọ bụ eziokwu. Ọ bụrụ n’agụ site na ntụaka ụfọdụ, o siri ike ikpebi ma ọ bụrụ na-ede eziokwu ma ọ bụ na ọ bụghị.
Dịka ọmụmaatụ, ekwuputara na ọ ga-akọ akụkọ onwe ya kama ijide ya (n'ụlọ). Ọ bụrụ n’inyocha google, ị ga-ahụkwa akụkọ na-emegiderịta onwe gị.
1) https://abcnews.go.com/Health/Wellness/chronic-fatigue-researcher-jailed-controversy/story?id=15076224 na-ede, na o debanyere aha na ụbọchị Tuesday.
E bipụtara akụkọ akụkọ a na Disemba 2, 2011.
2) https://mynews4.com/news/local/judy-mikovits-turns-herself-in na-ede, na o debara aha na Mọnde.
E bipụtara akụkọ akụkọ ahụ na November 29, 2011. Vidiyo nke akụkọ ahụ na-egosi na ahapụpụtara ya n'otu ụbọchị ahụ, nke na-abụghị eziokwu na akụkọ ndị ọzọ na-ekwu na ejidere ya ọtụtụ ụbọchị.
3) https://www.sciencemag.org/news/2011/11/controversial-cfs-researcher-arrested-and-jailed Sheriffs na Ventura County, California, jidere Mikovits ụnyaahụ n'ihi ebubo siri ike na ọ bụ onye mgbapụ site na ikpe ziri ezi.
E bipụtara edemede a na Satọde, Nọvemba 19 (ụbọchị iri maka isiokwu nke mynews10).
Ternyaahụ ga-abụ Fraịde Machị 18. Ọ dị iche na ozi abụọ gara aga. Enweghị m ike ịchọpụta ma enwere ọtụtụ ihe omume dị ka ijide ma wee jiri aka gị kọọ ya.
Otu edemede na sayensịmag.org (https://www.sciencemag.org/news/2020/05/fact-checking-judy-mikovits-controversial-virologist-attacking-anthony-fauci-viral#) na nzaghachi n'ihe Mikovits kwuru:
Mikovits: Abụ m onye dike n’ụlọ nga, enweghị ebubo m.
Ọkaiwu na mpaghara Washoe County, Nevada, gbara akwụkwọ maka mpụ megide Mikovits nke boro ya ebubo na iwere data kọmputa na akụrụngwa na-ezighi ezi na WPI. A tụpụrụ ebubo ahụ, n'otu akụkụ n'ihi nsogbu iwu nke onye nwe ya n'ọrụ mbụ chere ihu. '
N ’ederede nke isi 3, ọ na-ekwu, n’ihe ndị ọzọ:
'Onye na-ekwuchitere ndị ọrụ Washoe County Sheriff's Office gwara ScienceInsider na enyeghị ikike a, ma ọ bụ ngalaba ndị uwe ojii Reno ma ọ bụ Sparks. O kwuru na o nwere ike isi n’otu n’ime ụlọ ọrụ gọọmentị etiti dị na Washoe County. ’
O yighị ka ihe ahụ niile doro anya. Na mgbakwunye, site n'echiche ya (yana agbada ebubo ndị ahụ mgbe e mesịrị), ejidere ya n'enweghị ebubo ọ bụla. Echeghị m na ụdị ọnọdụ a bụ ihe ọhụrụ. N'ime 'ihe nkiri ahụ, ọ na-egosikwa na o nwere ihe metụtara izu ohi nke akụ.
Ọ dịkwa mma ịsị na ejiri foto ngwaahịa na / ma ọ bụ ihe nkiri nke otu SWAT nke na-enweghị ihe gbasara ya na njide. Nke a na-eme n'usoro nzukọ dị na mgbasa ozi. Ebipuwo ya, kee ya na ndu. Ihe obula ihuru na / ma obu iguta na mgbasa ozi bu iji nye gi obi uto. Nke a bụkwa ihe omume na mmemme dịka Zembla na ọbụna thegwọ Ọrụ. Leekwa foto dị n’elu edemede Forbes. Ọ bụrụ na nke ahụ abụghị imepụta mmetụta ...
Nyocha nyocha, debunking ... okwu eji eme ihe na-egosi ide ma ọ bụ ikwu eziokwu. Dịka ‘onye na-eche echiche izu’ bụ igbe nke mmadụ na-enye ebubo na-adịghị mma. Atụmatụ niile.
Ekwere m na ọtụtụ echiche anyị dabere na nkwenye, nkwenye na ntụkwasị obi. Gini bu eziokwu maka otu, nke ozo aghaghi ibu dika eziokwu. Na ihe bu izu izu maka otu mmadu bu eziokwu diri onye ozo. Ihe amamihe diri otu mmadu bu ara na onye ozo.
17 May 2020 na 05: 07
W Horchner, daalụ maka njikọ gị na nkwupụta gị.
Enwebeghị m ileba anya na njikọ ndị ahụ mana enwere m ike ịhụ na ị maara otú hares si aga.
12 May 2020 na 15: 54
ugbu a ụfọdụ akụkọ siri ike, nke ọma na Greta agbakeela KUCH😷
12 May 2020 na 19: 06
Lee nkwenye nke nnukwu akụkụ ihe Martin na-akpọ kemgbe afọ. Nkwenye kachasị mma bụ na njedebe, ihe nkiri ahụ dị nkeji iri na itoolu, mana nkeji atọ ikpeazụ bụ maka ndị niile na - agụ akwụkwọ na ndị na - ekwenye ekwenye ọnọdụ IMBers kwuru bye bye, megide ihe ị chere na ị nwere ugbu a. Ehee kwa ezinụlọ gị nke ọma. Otu ubochi inwere ike diri onye nwe gi. Ma na mgbe ahụ ị ga na-ahụ ihe ga-adị ka ndị ọzọ niile. Eleghi anya nwoke a g’enye gi nghọta. Agbanyeghị na ọ nwere ike ọ gaghị aga, maka na ị rapara na web nke gị. Martin ị bụ otu n'ime mmadụ ole na ole na-alụ ọgụ maka nnwere onwe n'ezie. Daalụ maka mbọ niile ị gbara. Agbanyeghi na ndi IMBers ka na eche na ha bu ndi dike nye ndi nwe ha. Ihe niile abịa na njedebe.
17 May 2020 na 04: 59
Lee ụfọdụ data Tony Heller;
" Mwakpo dị egwu na weebụsaịtị Martin Vrijland, mana anyị ga-aga n'ihu!
Oge maka nnukwu mgbanwe na nnukwu ntụgharị: bịanyere aka na arịrịọ ahụ »
Nleta ha: 2.429.279